Ixhuma London ne-Amsterdam, Avignon, Brussels, ezincane, Lyon, Marseille, Paris, futhi Rotterdam, Cishe Eurostar ithandwa kakhulu ngesivinini inkonzo ujantshi eYurophu. Futhi, Getlink eceleni usebenza futhi enelungelo izitimela. Enqamula Umhubhe Channel phakathi United Kingdom neFrance. Running on inethiwekhi ijubane eliphezulu imigqa, Eurostar izitimela count nesishiyagalombili-imoto Class 373/1 izitimela nesithupha-imoto Class 374 izitimela. Bagijima at kuze 186 mph (300 angu ngehora). Ngaphezu kwalokho, Eurostar ithwala abagibeli abangu-ngaphezu kwabo bonke izindiza kuhlanganiswe. Lokhu kwenza Eurostar okuyizona wesitimela opharetha phezu imizila ukuthi usebenza.
I TGV ngamazwe empumalanga kuzokusa Frankfurt kanye Munich. Ngokufanayo, yakho eningizimu yohambo kuzokusa ngqo Milan e-Italy noma Barcelona eSpain. Ungenzi iphutha lokuhamba, TGV ingenye ukhululekile kakhulu engu- umngcele izitimela! Ngaphezu kwalokho, kuzokuthatha ohambweni oluhle kakhulu lwezothando kusuka Paris kuya ogwini lweMediterranean. noma, kuya Bordeaux langa, Lyon futhi Marseille kanye Cannes edumile emhlabeni wonke. Ngakho-ke, uma ufuna ukufinyelela France kanye / noma Switzerland ngesitimela, ungenza lokho ngu agibela engu- umngcele izitimela eziqhutshwa TGV Lyria.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcross-border-trains-europe%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml futhi ungashintsha i- / es ibe yi- / fr noma / de nezinye izilimi.